The Gardener: ကျွန်တော်၏ ထင်ယောင်ထင်မှားများ
Still Life and Street ,a woodcut print by the Dutch artist M. C. Escher
ကျွန်တော်တို့စတင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့မြို့ကလေး။ စိတ်ထဲဝင်ရောက်နေထိုင်သွားတဲ့ဝင်ကစွပ်မြို့ကလေး ....။ အခွံလွတ်တွေ ပျော်ရုံနေထိုင်သွားတဲ့အရပ်ဒေသ... အဲဒီအခွံလွတ်ဟာလည်း ပျော်ဝင်လွယ်တယ်။ ထိခိုက်ကွဲရှလွယ်တယ်။ ကံကြမ္မာနဲ့လောင်းကြေးထပ်ထားတဲ့နေရာ ... အသည်းကွဲသီချင်းတွေ ထထမြည်တတ်တဲ့၊ သေကောင်ပေါင်းလဲ ကဗျာတွေရေးနေတဲ့၊ လမ်းကျဉ်းလေးတိုင်းမှာ ချစ်သူ(တွေ)ကို ထားခဲ့ရတတ်တဲ့၊ ကိုယ်ကိုချစ်သလောက် ကိုယ်ကပြန်မချစ် နိုင်တဲ့ ၊ မမြင်ရတဲ့ သံလှောင်အိမ်ထဲက မမြင်ရသေးတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်လိုမြို့လေး ... လမ်းလျှောက်တတ်ခါစ ကလေးလေးရဲ့ ယိမ်းယိုင်နေတဲ့ အပြေးတပိုင်းမြို့ကလေး။ စာအုပ်ထူထူတွေကြားမှာ အမှန်တရားဟာ ပိုက်ဆံ အသစ်တစ်ရွက်လိုညပ်နေမယ်လို့ထင်တဲ့၊ ပညာတတ်မာနကို မောင်းတင်ပြီးမှ ပစ်မချနိုင်သေးတဲ့။ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ အ၀တ်လှန်းသလို လှန်းထားရတဲ့၊ ကိုယ်စစ်ရှုံးခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အပြုံးတွေ သံတံခါးနားကျပျောက်သွားတဲ့မြို့ကလေး။ ငရဲ .. ငါတို့ကျပျောက်သွားတဲ့ သက္ကရာဇ်ကို ခိုးရောင်းလိုက်တဲ့ မြို့ကလေးကို မင်းမှတ်မိမလားမသိဘူး။ အဲဒီမြို့ကလေးဟာ ငါတို့ပဲမဟုတ်လား။
Drawing by M. C. Escher
ဘ၀ကို ဘာအတွက်မှန်းမသိ နေထိုင်ခြင်းတွေနဲ့ ပုံတွေဆွဲတယ်။ ကဗျာတွေရေးတယ်။ သဘာဝတရားထဲမှာနေထိုင်တယ်။ သဘာဝတရားအကူအညီနဲ့ ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့ကောင်မလေးတွေကို ငေးတယ်။ သစ်ရွက်တွေလှတာကို ခံစားတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီးတွေဈေးကြီးပေးပြီး နှုတ်ခမ်းတွေ ဈေးပေါနေတဲ့အကြောင်း စကားဖောင်ဖွဲ့တယ်။( မြန်မာ ကဗျာလောကကြီး တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားအောင် ကဗျာရေးကြမယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြတယ်။ )ရန်ကုန်-သန်လျင်လမ်းမတစ်လျှောက် စိတ်ကို ဂွေလိုလှိမ့်တယ်။ ကျောက်တန်းရောက်ရင် ညာဘက်ကိုချိုးလိုက် ... အဲဒါကျောင်းဆိုတဲ့တစပြင်ပဲ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်း အင်ဂျင်နီယာတွေ မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာနဲ့(မည်သို့မည်ပုံမသိ) ရင်ပေါင်တန်းနေတဲ့ကျောင်းမှာ ငါတို့ဘ၀ကို ပုံဆွဲတယ်။ ခဲဖျက်မရှိတဲ့အတွက် ဖဲချပ်တွေကို ပြန်မဖျက်နိုင်ဘူး။ လိမ်မာတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်မဖြစ်ခဲ့တာ ပြန်မဖျက်နိုင်ဘူး။ အသုံးမကျတဲ့ကောင်တွေကို အထင်သေးတာကို ပြန်မဖျက်နိုင်ဘူး။ အပြောင်းအလဲကို မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သမားရိုးကျ ကန်ကြီးထဲမှာ ကူးခတ်ခွင့်ရတဲ့ငါးတွေဟာ မှန်ပုံးဧရှိယာနဲ့ ဒိုင်မင်းရှုင်းအရပဲ ကူးနိုင်မယ်။ ငါတို့ဟာ ဉာဏ်ရည်အထက်မြက်ဆုံးအချိန်ကို ဒိုးဇက် ဆက်ရင်း ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြတယ်။ ငါတို့ဆွဲခဲ့တဲ့ပုံတွေထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အပြုံးတွေဟာ အသက်အ၀င်ဆုံးပဲ .....။ ငရဲ ... စွယ်တော်ရွက်တွေဟာ သိပ်လှပေမယ့် လူတွေက စွယ်တော်ပန်းလောက်ပဲ စာဖွဲ့ချင်ကြတာပါကွာ။
Realitivity by M. C. Escher
တစ်ခါတလေ ဘ၀ကြီးကို ဖြတ်သန်းသွားနေကြတာ ဘယ်သူအမှန်လဲ မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဘူး။ စိတ္တရလေခါဖတ်တုန်း က အရက်သောက်သင့်တယ်လို့ ယူဆမိသလိုမျိုးကိစ္စပဲ။ တက်နေတယ်ထင်တဲ့လှေကားတွေက အဆင်းဖြစ်နေတာမျိုး ...။ ချစ်ခဲ့တယ်ထင်တာတွေက ဟိုးရှေးရှေုးတုန်းကနဲ့စတဲ့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတာမျိုး၊ ဘာသာရေးဆောင်းပါးဖတ်သလို ယုံနိုင်သလောက်ယုံလိုက်တာကောင်းတယ်။ ရပ်ကြည့်သွားတွေကို မီးပွိုင့်တွေ အစားထိုးသွားသလို ကမ္ဘာကြီးကလည်း အိမ်မက်အဟောင်းတွေကို အစားထိုးသွားတယ်။ ယုံကြည်မှုတွေဟာလည်း ပြောင်းလဲပြင်လွယ် ဖြစ်လာတယ်။ ရှေ့တစ်ရက်ကို မသေချာတဲ့အတွက် အတိတ်မှာပဲ အခြေချလိုသူတွေများလာတယ်။ သိပ်ကို အသုံးမကျတဲ့ အသေးဆုံး ဒြပ်စင်တွေလို stable electronic structure ရဖို့ပေါင်းသင့်တာပေါင်း၊ ဖြုတ်သင့်တာဖြုတ်တယ်။ တခါသုံးအပြုံးတွေကို အသုံးပြုတယ်။ လက်အိတ်တွေနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်။ လစာနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှု ပြောင်းပြန်အချိုးကျတိုးတက်လာတယ်။ အဲဒီအတွက်ေ-ာက်ရမ်း နေပျော်ပါတယ်ဆိုရင် မင်းလည်းရူးပြီ။ ငါလည်းရူးပြီ။
နောက်ဆုံးတော့ရခဲ့တဲ့ လိမ္မော်ရောင် အစက်နှစ်စက် က အရွယ် အတူတူပါပဲကွာ။ ....... ငါတို့ဘာကိုယုံကြည်ကြမှာလဲ။ မိထားတဲ့ငါးကို ကြီးလိုက် သေးလိုက်လုပ်နေတာ၊ ချုံထဲကငှက်နှစ်ကောင်ကို တန်ဖိုးမြှင့်နေတာ၊ ဟိုဘက်ခြံက မြက်ကို ပိုစိမ်းနေစေတာတွေက ဘယ်သူလဲ ...။ ဘယ်အရာလဲ။ မြွေပွေးကို အတွင်းခံဘောင်းဘီမှတ်ပြီးဝတ်နေမိသလိုကောင်တွေ ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာတဲ့ဘ၀ကြီး ......... မင်း နေပျော်ပါရဲ့လား။
ယုန်လား၊ ဘဲလား။ လူနှစ်ယောက်လား၊ ပန်းအိုးလား .............။ ဘ၀ကြီးကို နောက်တစ်ဖက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ငါတို့ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ .........။ ငယ်တုန်းက အချစ်တွေဟာ ကော်ဖီတစ်ခွက်လိုပဲ .....။ ကျကွဲသွားတဲ့ကော်ဖီခွက်တွေတောင် ... ကျဆဲအခိုက်မှာတော့ ဒဏ်ရာမရတတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းက ကိုယ့်အသည်းမှ တကယ်ကွဲတယ်ထင်နေတတ်တာမဟုတ်လား။
အရောင်အတူတူပဲ ......... ငါတို့တွေသာ မခွဲတတ်တာ။
ပြင်ပလွှမ်းမှိုးမှု၊ ဒါမှမဟုတ်၊ အယောနိသောမနသီကာရ ....။ ဒီနေ့လည်း မိုးရေချိန်မြင့်မားတဲ့ ရာသီဥတုတစ်ခုကောက်ရခဲ့တယ်။
တစ်ဖက်တည်းလည်နေတာကို အပြန်အလှန်လည်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။ အသက်ကြီးလာလေ ကိုယ့်အမှားကိုယ် သဘောပေါက်လာလေပဲ။ ခံစားချက်တွေ နည်းလာတာလား ထုံလာတာလား ....။ အဲဒီလို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နည်းလာတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မေတ္တာနဲ့မယှဉ်တဲ့ဥပေက္ခာတွေ အားကောင်းလာတယ် ငါ့ရှင် .........။ ဒီနေ့မှာ ငါတို့ သိခဲ့တာတွေမှာ အမှားတွေဘယ်လောက်ပါသွားပြီလဲ သတိထားကြည့်ရဦးမယ်။ မနက်ဖြန်မှာ သောက်မယ့်ဝိုင်ပုလင်းကို ဒီနေ့ကြိုဖောက်နေတာ ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူး ...ေ-ာက်သုံးမကျတာ။ အဲဒါကို လက်ခံနိုင်ဖို့ ... ယောနိသောမနသီကာရ အနည်းငယ် ... ဒီ post နဲ့အတူ .. ပို့သလိုက်ပါတယ်။
Dedicated to my dear friend, yeyene. ငရဲ
Hi buddy, horizontal lines are parallel .... though we thought they are not ... How difficult to see the truth ..., how difficult to possess the ability to create arts ...? Don't waste your talent, dude ... If someone decided to do something, he/she must try to accomplish what he/she had decided to accomplish. Looking forwards to seeing your creative artworks. Once "dead soul", now "yeyene". Once "alive angel" now "Zephyr" ...Keep Creating what you believed to do since childhood ....!!! By the way, mom also encourages you to write again : poems and short stories ... Both of us started from Idea Magazine under the same Editor and if you don't write I will be so boring to compete with .. hahah. Let's shake the Sar-Pay-Law-Ka, I think the one in Yankin can be the easiest one to be shaken. :P. Should have the red blood as we always said.
All images are downloaded from Wiki-realated pages.
Read more some articles in wiki if you want to know more about them ..